Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Dahaarka Daawada - Shiinaha Warshadda Dahaarka Daawada
Taxanaha Slide Drawer
Wajiga muraayadaha budada ah ee buufinta hoose ee buufinta iskiis u xirida
Hordhac:Wajiga muraayadaha budada ah ee buufinta hoose ee buufinta iskiis u xirida. Waxaa lagu sameeyay mashiin lagu tuntay. Waad u adeegsan kartaa nooca Mareykanka armaajooyinka jirkooda. Awoodda xamuulka ilaa 25 KGS iyo baaskiil wadista in ka badan 50,000 jeer. Astaantu waa istuujinta gawaarida leh dheelitirka dheelitirka, sibidhka siman ee buuqa yar, shaqada laxiriira iskiis, lammaanaha hakadka yar ee joogsiga si looga hortago dhismaha isbadalka. Dusha sare wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad lagu buufiyo oo horumarsan, oo aan sun ahayn oo deegaanka u habboon, ka-hortagga daxalka, anti-miridhku.
Qaab No.: US02A
604 Taxanaha yurubiyanka sii kordhaya ee isdabajooga ah ee budada duuban ee duuban
Hordhac:604 Taxanaha hoose ee yurub ee isdabamarinaya budada udhaw duubista duubista waa nooca ugu fudud ee slide ah. Waxaa lagu sameeyay mashiin lagu tuntay. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada khaanadaha guryaha. Awoodda xamuulka ilaa 25 KGS iyo baaskiil wadista in ka badan 50,000 jeer. Astaantu waa istuujinta gawaarida leh dheelitirka dheelitirka, sibidhka siman ee buuqa yar, shaqada laxiriira iskiis, lammaanaha hakadka yar ee joogsiga si looga hortago dhismaha isbadalka. Dusha sare wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad lagu buufiyo oo horumarsan, oo aan sun ahayn oo deegaanka u habboon, ka-hortagga daxalka, anti-miridhku.
Qaab No.: YA-01
Taxanaha FGV ee hoose xirashada isdaba-marinta boodhka boodhadhka Koonfurta Ameerika
Hordhac:Taxanaha FGV Taxanaha hoose ee isdaba-marinta boodhka boodhka ee Koonfurta Ameerika bogagga jiidda khaanadaha ayaa ah nooca ugu fudud ee slide ah Waxaa lagu sameeyay mashiin lagu tuntay. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada khaanadaha guryaha. Awoodda xamuulka ilaa 25 KGS iyo baaskiil wadista in ka badan 50,000 jeer. Astaantu waa istuujinta gawaarida leh dheelitirka dheelitirka, sibidhka siman ee buuqa yar, shaqada laxiriira iskiis, lammaanaha hakadka yar ee joogsiga si looga hortago dhismaha isbadalka. Dusha sare wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad lagu buufiyo oo horumarsan, oo aan sun ahayn oo deegaanka u habboon, ka-hortagga daxalka, anti-miridhku.
Qaab No.: YA-02
86mm Dhererka khaanadda dhalada ku dhaji khaanadda sanduuqa birta
Hordhac:86mm Dhererka khaanadda dhinaca khaanadda khaanadda khaanadda birta ayaa ah nooca ugu fudud ee nidaamka khaanadda. Waxaa lagu sameeyay mashiin lagu tuntay. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada khaanadaha guryaha. Awoodda xamuulka ilaa 25 KGS iyo baaskiil wadista in ka badan 50,000 jeer. Astaantu waa istuujinta gawaarida leh dheelitirka dheelitirka, sibidhka siman ee buuqa yar, shaqada laxiriira iskiis, lammaanaha hakadka yar ee joogsiga si looga hortago dhismaha isbadalka. Dusha sare wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad lagu buufiyo oo horumarsan, oo aan sun ahayn oo deegaanka u habboon, ka-hortagga daxalka, anti-miridhku.
Qaab No.: YA-03A86
118mm dhalada khaanadda biraha birta ah (duub duuban duuban duuban)
Hordhac:118mm dhalada khaanadda birta ah (duufaanta duuban ee duuban) waa nooca ugu fudud nidaamka khaanadda. Waxaa lagu sameeyay mashiin lagu tuntay. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada khaanadaha guryaha. Awoodda xamuulka ilaa 25 KGS iyo baaskiil wadista in ka badan 50,000 jeer. Astaantu waa istuujinta gawaarida leh dheelitirka dheelitirka, sibidhka siman ee buuqa yar, shaqada laxiriira iskiis, lammaanaha hakadka yar ee joogsiga si looga hortago dhismaha isbadalka. Dusha sare wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad lagu buufiyo oo horumarsan, oo aan sun ahayn oo deegaanka u habboon, ka-hortagga daxalka, anti-miridhku.
Qaab No.: YA-03A118
150mm dhalada khaanadda birta ah
Hordhac:150mm dhalada khaanadda birta ah waa nooca ugu fudud ee nidaamka khaanadda. Waxaa lagu sameeyay mashiin lagu tuntay. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada khaanadaha guryaha. Awoodda xamuulka ilaa 25 KGS iyo baaskiil wadista in ka badan 50,000 jeer. Astaantu waa istuujinta gawaarida leh dheelitirka dheelitirka, sibidhka siman ee buuqa yar, shaqada laxiriira iskiis, lammaanaha hakadka yar ee joogsiga si looga hortago dhismaha isbadalka. Dusha sare wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad lagu buufiyo oo horumarsan, oo aan sun ahayn oo deegaanka u habboon, ka-hortagga daxalka, anti-miridhku.
Qaab No.: YA-03A150